एमाले नेता लालबाबुसँग केकीको भेट किन ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
एमाले नेता लालबाबुसँग केकीको भेट किन ?
फिल्मी फण्डा । नायिका केकी अधिकारीले एमाले नेता लालबाबु पण्डितलाई भेटेका छन् । उक्त भेटघाट भने बालबिबाह र दाईजो प्रथा उन्मुलनको लागि निर्माण भएको फिल्म राज्जा रानीको प्रमोशनमा भएको हो । नायिका केकी अधिकारीलाई मन पर्ने नेता मध्यका एक हुन् लालबाबु पण्डित ।
पण्डितलाई देखेपछि केकीले हजारको नोटमा लालबाबुको अटोग्राफ समेत लिइन् । चल्तीकी सिनेमा नायिकाले आफूबाट अटोग्राफ लिएपछि लालबाबु पनि के कम ? उनले केकीको सौन्दर्य प्रशंसा गर्न भ्याए । लगत्तै फिल्मको गीतमा उनले केकी र नाजिरसँग कम्मर भाँचे ।
लालबाबुलाई राज्जा रानीले बिराटनगर १२ स्थित स्थानीय बखरी बगैंचामा आयोजित पब्लिसिटी कार्यक्रममा समेत मुख्य अतिथि बनाएको थियो । आफू मन्त्री बने फिल्मको लगानी उठाइदिने समेत पण्डितले बचन दिए । उक्त क्षेत्र पण्डितको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो ।
राज्जा रानीले दहेज अर्थात दाइजो प्रथाको कथा समेटिएको फिल्म हो । अब बन्ने वाम सरकारले दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्न बेहुली पक्षको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने योजना ल्याउने लालबाबुले बताए । मोफसलमा केकीसहित अभिनेता नाजिर हुसेन र भोर कम्पनीका प्रतिनिधि टोलीमा छन् । फिल्म पुस २१ गते रिलिज हुनेछ । रमेश एमके पौडेलले निर्माण गरेको फिल्मलाई यम थापाले निर्देशन गरेका हुन् ।